Maxaa Ka Khaldan Kaarkaaga Ganacsiga? | Martech Zone
Kaararka ganacsiga marwalba waxay ii ahaayeen layli xiiso leh. Had iyo jeer waxaan ku sameeyay wax ka duwan kaararka ganacsigeyga - marka hore aniga ayaa ahaa Kaararka wax lagu qoro oo leh sawirkeyga, ka dibna xirmooyin Qoraalada PostIt, uguna dambaysay kaar caato ah oo leh qaybiyaha laga helo Zazzle.
Maanta waxaan daawanaayey teleseminar ah Alex Mandossian oo ah taxane waxbarasho ganacsi ah oo aan ka mid noqonayo isla markaana wuxuu ii tilmaamay fursad weyn oo aan u ogolaaday inay siibato past saddex kaararka ganacsiga oo isku xiga!
Qaar ka mid ah runta ku saabsan kaararka ganacsiga
Dadka badankood ma xasuustaan ​​qofka ay ka heleen.
Badankood si fudud ayaa loo tuuraa. Waxaad ku bixisay wax si dhif ah u leh soo noqoshada maalgashiga!
Dadkaas sida dhabta ah u ilaaliya, tiro aad u yar ayaa weligood wax laga qabtaa… badanaa maxaa yeelay badanaa ma jirto sabab loo sameeyo!
Maxaa lagu horumarin karaa aad kaarkayga ganacsiga?
Sawirkaaga saar kaarkaaga ganacsiga. Tani waxay dadka u oggolaan doontaa inay xusuustaan ​​ciddaad ahayd!
Alex wuxuu sheegayaa inaad ku darto laaluushka anshaxa. Si kale haddii loo dhigo, ma jiraan wax kaarkaaga ku jira oo aad bixin karto oo qof u horseedi kara inuu tallaabo qaado? Tusaalahiisu waa lambar 1-800 leh farriin horey loo duubay. Ma ahan shaqsiyad waana aamin… qofka wacaana wuu ka faa'iideysan karaa farriinta.
Ku dar fariin loo habeeyay dhacdada aad u dhiibtay. Haddii aad ku sugan tahay dhacdo xiriirinta, dalbo kaararka qaar dhacdooyinkaas. Haddii aad ka hadlayso dhacdo, ku dar dhacdada! Haddaad shir joogto… shirka dhig. Waxaa qoray habaynta kaarka dhacdada, waxaad un siisay qaataha a boodhadh yar si loogu martiqaado inay la xiriiraan iyo sidoo kale inay bixiyaan qayb fayras ah. Markuu Alex dhiibo 500 kaararka, wuxuu arkayaa booqashooyinka 2,000 ee bogaggiisa iyo lambarrada taleefannadiisa. Taasi waa qayb fiican oo fayras ah!
Waxaan doonayaa inaan dalbado qayb kale oo kaararka ganacsigayga ah waxaanan raaci doonaa talooyinkan. Sawirkeyga waa lagu dari doonaa (taa!) ganacsi.
Ii sheeg haddii aad xiiseyneyso ee taxanaha ganacsiga ee aan iska diiwaangelinayo. Waa waxoogaa qiimo jaban, laakiin haddii aan helo hal qandaraas oo aan ku bixiyo kaararka ganacsiga, waxay bixin doontaa dhammaan taxanaha ganacsiga… waxaanan ku jiraa fiidiyaha ugu horreeya. Waxaan ku helay bogaadin badan kaadhadhkeygii ugu dambeeyay - laakiin ma dhihi karo waxay ku faafeen ama ganacsi iiga heleen!
Tags: saadaasha kharashka xayeysiiskaqarash gareynta facebookkharashka xayeysiiska moobiilka ee facebookgoogle iyo kharash garaynta xayeysiiskadesign graphicdhufto eedaruuraha suuqgeynta iibkakharashka xayeysiiska bulshadakharashka xayeysiiska twitter
Sep 10, 2009 at 12: 31 AM
Alex Mandossian waa ninka! Sug 'intaad ka daawaneyso fiidiyaha faahfaahinta talaabo talaabo talaabo ah sida loo wado teleseminar. Dad badan baa khalad u hela !!
Sep 10, 2009 at 2: 12 AM
Waxaan jeclaan lahaa inaan cadeeyo ilaha aan ka soo xigtay, Doug, laakiin ma xasuusan karo halka aan tan ku aqriyay, waqti aad u fog ka hor: kaararka ganacsiga ee sawirkaaga ku jira 50% ayay u yar tahay in qashinka lagu tuuro. Waxaa laga yaabaa in qof kale uu xaqiijin karo tan.
Sep 10, 2009 at 3: 34 AM
Shaki iga gali maayo, Bob! Shirkadaha qaarna xoogaa waxay kubixiyaan kaararka ganacsiga - iyagoo aan aqoonsanayn qiimahooda haddii si buuxda looga faa'iideysan lahaa.
Sep 10, 2009 at 3: 48 AM
Kaliya xusuusnow, maahan inaad kaarkaaga xusuus ka dhigto. Waxay ku saabsan tahay helitaanka rajooyin si aad u QAADO FICIL markay guriga ku noqdaan ama ku noqdaan xafiiska.
Sep 10, 2009 at 2: 09 PM
Si fiican ayaa loo yidhi, Patric!
Sep 10, 2009 at 2: 18 AM
Waa inaad u isticmaashaa diyaaradda waraaqda ah sida nooca astaantaada kaararkaaga. Waxaa laga yaabaa in kaarkaaga oo dhan uu noqdo astaantaada muuqaalka koowaad laakiin markii uu soo baxo waxay haysaa macluumaadka aad ku sheegtay boostada kore. Way adkaan kartaa in la sameeyo laakiin way fiicnaan laheyd oo la xasuustaa hubaal.
Sep 10, 2009 at 3: 33 AM
Taasi waa fikrad aad u fiican, abuur badan! Waxaan sifiican u eegi karaa inaan wax ku sameeyo fikradaas mustaqbalka. Mahadsanid!
Sep 10, 2009 at 3: 40 AM
Doug baaro avatar-kayga aan magaca lahayn, nooc wuxuu la socdaa blog-ka 🙂 Waxaan ku soo galay Twitter-ka waxaanan haystaa avatar Twitter ah oo aniga lafteyda ah pic la yaab leh sababta ay u soo bixi weyday
@bcreative - sawirada waxaa laga soo jiiday gravatar.com - mid hel! 🙂
Dareenka guud marka hore wuxuu u muuqdaa mid aan dhameystirnayn. Waxaan u maleynayaa in shaqo badan oo dhinaca qoraalka ah iyo asal fiiqan ay caawin doonto. Ma dhihi karo waxa la badalayo laakiin waxaad weydiin kartaa ra'yi.